Hooyada Federaalka, “anaa dalka ugu caqli badan, dastuurkana ugu badiya” - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Hooyada Federaalka, “anaa dalka ugu caqli badan, dastuurkana ugu badiya”
Hooyada Federaalka, “anaa dalka ugu caqli badan, dastuurkana ugu badiya”
Muqdisho (walwaal online), Maqaalkan waxa aan ka soo xiganey barta facebook-ga ee Muadne Mahad Gelle..
War murtiyeedka Shirka Puntland, kasoo baxay ayaa i xasuusisay sheeko, ay BBC ka qortay Madaxweyne Donald J. Trump, oo sheegtay in uu ka caqli badanyahay xoghayihiisii arrimaha dibedda Rex Tillerson.
Ma ahan markii ugu horeysay oo Trump, sheegto caqli badnaan, sanadkii 2013–kii ayuu sheegay in uu aad uga caqli badanyahay madaxweynihii hore Barack Obama iyo xitaa George W. Bush.
Waxaa kale oo uu sheegtay in uu ka caqli badanyahay majaajiliistaha caanka ah Jon Steward iyo jilaaga kale ee Britain u dhashay Lord Sugar, ee jilli jiray barnaamijkii taleefishinka uu ka daadihin jiray Trump ee ‘‘the Apprentice’’.
Balse sidaas oo ay tahay Trump, wali ma uusan sheegin inta uu la egyahay caqligiisa.
Halbeegga caqliga lagu cabiro ee loo yaqaano (IQ) ayaa waxaa lagu qiimeeyaa inta uu la egyahay qofka garaadkiisa kadib markii uu ka qeyb galo tijaabo su’aalo lagu weydiinayo, waxayna ku xirantahay sida hufan ee dhaqsiyaha badan ee qofku uga jawaabo su’aalaha.
Sida uu BBC–da u sheegay Dr. Frank Lawlis, oo ku taqasusay cilmi–nafsiga, tijaabooyinka qofka laga qaado ayaa lagu qiimeeyaa sida uu jawaabaha u saxo iyo waliba sida uu hadalka u helo.
Tusaale ahaan hal xiraalaha lagu jirabo dadka caqliga badan, waxaa kamid ah, ‘‘Jamaad ayaa booqatay Jawaahir. Jamaad, waa gabadha kaliya ee ay dhashay gabadha uu dhalay ninka qaba islaanta sodohda u ah ninka Jamaad. Haddaba maxay isu yihiin Jamaad iyo Jawaahir?’’
Dr Barbara Perry, oo madax ka ah kulliyadda daraasaadka madaxweynayaasha ee University of Virginia, ayaa sheegtay in aysan waligeed arkin wax la diiwaangaliyay oo muujinaya heerarka caqliga madaxweynayaasha taariikhdoodu taal Miller Center of Public Affairs.
Balse waxa ay sheegtay in ay aragtay diiwaanka madaxweynayaasha helay abaalmarinta Phi Beta Kappa, oo la siiyo dadka ugu garaad fiican, heerka sarena ka gaaray aqoonta.
Phi Beta Kappa, ayaa la aasaasay December 5, 1776, waxaana lagu abaalmariyey arday shahaadada koowaad ka qaatay labo boqol, siddeetan iyo lix (286) jaamacadood ee Maraykan ku yaal, kuwaas oo darajooyin sare ka heley waxbarashada.
Madaxweynayaasha Maraykan soo maray, 17 ka mid ah ayaa helay abaalmarintan, waxaana ugu dambeeyay oo helay Bill Clinton, George W Bush, iyo Jimmy Carter.
Dr Perry, waxa ay intaas ku dartay in garaadka uusan ahayn kan kaliye ee lagu noqdo madaxweyne fiican, mararka qaarkood dabeecadda wanaagsan ay ka habboontahay caqliga.
“Xaakimkii maxkamadda sare Oliver Wendell Holmes, ayuu ahaa ninkii yiri Madaxweyne Franklin Delano Roosevelt, caqligiisa waa kan darajada labaad, balse dabeecadiisa waa darajada koowaad…..Sidaasi oo ay tahay Roosevelt, waxaa doortay wax ka badan saddex meelood labo meelood ergada, weliba saddex jeer, Mareykana waxuu mootiyey dagaalkii labaad ee adduunka” ayay intaas raacisay Perry.
Haddaa maqasho (Dastuurka Federaalka, aa la jabiyey), markii xeer ama sharci la meel mariyo, ayada oo weliba habraaca dastuurku qabo la maray, waa ‘‘anaa dadka ugu caqli badanta’’ Trump, oo kale oo Puntland, af Soomaali, noogu sheegayso.
Previous articleWasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa Goordhow la wareegtay shaqsi looga shakiyay Cudurka Covid 19.
Next articleUjeedka safarka Xasan Cali Kheyre ee Addis Ababa, oo la ogaadey